Makore gumi chete apfuura kufambidzana paIndaneti akanga chepakarepo kumbonzwiwa, uye vaya vanoziva nezvazvo vaifunga kuti zvakanga chinhu chinoshamisa nokuda chaizvoizvo 'kunze uko' marudzi kana kuti wakaora vanhu vakanga vasingagoni kuwana musi 'inowanzotorwa nzira'.
Kangani zvachinja! kudanana Online ndiye ndozvakajairwa zvino zvakabatikana, basa dzakanaka vanhu, Zvisinei haisi vanhu vakabatikana vasvetukira pamusoro paIndaneti kufambidzana chitima – o hapana! Munhu wose kubva chirikadzi rakatevera musuo wako Uncle Sam sokuti nazvo! Vakuru, majaya, varume uye mukadzi vaibva mumamiriro ezvinhu ose oupenyu, zvitendero, marudzi uye siyana vari kuzviita. kufambidzana Online zvachinja kubva chinhu chete 'vakasurukirwa mwoyo' kwaizoita funga, kuti ava zvakakomba zvikuru nzira zvevakomana. Kunyange akanaka, vakabudirira vanhu vari kuzviita, kodzero pamwe wese! Nekuti isu tose vakaziva chaizvo kuti rekurira zviri! Munguva iyi paIndaneti auya chaiva dzinongoitika kunoita.
Saka zvii zvayakanakira nezvayakaipira zvokufambidzana paIndaneti uye unogona chaizvoizvo kuwana rudo rwechokwadi iyi nzira?
Zvakanaka vamwe zvayakanakira dziri pachena. Unofanira kuwana kuwana vanhu vakawanda kupfuura iwe aizokwanisa kusangana nokuda kufambidzana neimwe nzira dzechinyakare. Asi ichi kunogona kuuya aine rumborera vari muswe, zvichireva kuti kune yakawanda vanhu vachakwanisa kuwana kwamuri imi varege zvausingafungi vanoda anobatana. Uyewo pane uwandu 'anokurumidza turnover' kuti chingaitika pamwe paIndaneti kufambidzana, izvo kana usina aigadzirira, anogona kusiya munhu kunzwa zvikuru mwoyo.
Ko ndinoreva kuburikidza 'nokukurumidza turnover'? Zvakanaka kuti ungave uchitaura nemunhu zuva rimwe, chete kuti zvachose Zvibvisike kure Radar chinotevera. Izvi ndizvo chaizvo nevakawanda. Iwe achatuma e-mail kuti Haumbomuki akapindura uye mukana wokuti ndechokuti uchava vamwe iwe kumbobvira kupindura kana. Zviri kure zvishoma pachavo pane dzimwe nzira dzechinyakare kudanana uye izvi chichikusvota vamwe vanhu. Ndaona izvi zvinoita kuti varove vakuru kuoma, sezvo vari kushandiswa zvikuru noruremekedzo miitiro kufambidzana chinyakare, apo somuenzaniso imi aizoudza munhu kana ndisingadi kudanana navo zvakare, uye haisi saizvozvo paIndaneti (kunyange kana tikafunga inofanira kuva).
Zvisinei kana iwe unogona kugamuchira shoma nuances izvi, Ndinofunga inogona kukuru chishandiswa unobatanidza nevanhu, uye hongu kunyange kuwana rudo.
Chokwadi pane chinhu zvishoma zvishoma kudanana zvikuru 'chakarongwa' pamusoro kukurukurirana nomukombiyuta e-mail, Zvisinei unogona kuva ruzha kuona chii e-mail iwe kuwana uye tauriranai nezvezvipingamupinyi rudo zvido. Uye chokwadi kana kuenda chaiko 'ari munhu' kufambidzana danho, muchirezvana anogona iine nyore zvino.
Unofanirawo kuva vakagadzirira nokuda chokwadi kuti zvimwe kusangana vanhu vakawanda murege murudo pamwe – chokwadi urege kunyange wazvose! Mumwe anogona kuposita guru Profile asi kana ukasangana navo munyika chaiyo kubatana handiye ikoko. Uyewo chenjerai nokuti pane dzimwe all scammers paIndaneti, vanhu vasiri zvechokwadi uye inongova panze kuedza vanonyengedza yako mari kana pachavo mashoko. Pane kunyanya vachiwanzosvimha yangu, asi ivo vari imomo Mix. Panewo vanhu vari chete 'kufara', vanhu vari paIndaneti vachitsvaka pabonde, uye kunyange vamwe vanhu vari kuroorwa. Zvisinei kana iwe unogona kubata ichi uye kwete kuti de-chakaita, ipapo iwe zvirokwazvo anogona kusangana mumwe paIndaneti akakwana kwamuri, uye ani kamwe iwe wasangana muupenyu chaihwo, unogona dzinodawo chaihwo. Ndinoziva vakawanda vakaroorana hubudirire vanenge akasangana iyi nzira.
Chingorangarirai Zvisinei, kusvikira akasangana navo munhu hazvisi zvechokwadi.
saka Upenyu Real = Real Love.
Uye chete kamwe iwe uitore offline NO uye upenyu chaihwo kuti akwirwe wechokwadi anogona kuva noukama hworudo.